नेटिभ विज्ञापन सामग्री मार्केटिंगमा: T सुझाव र युक्तिहरू Martech Zone
मंगलवार, मार्च 24, 2020 मंगलवार, मार्च 24, 2020 एलिस जोन्स
सामग्री मार्केटिंग सर्वव्यापी हो र सम्भावनाहरूलाई पूर्ण-समय ग्राहकहरूमा परिवर्तन गर्न यो दिन गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। सामान्य व्यवसायले भुक्तान पदोन्नति मेकानिजमको साथ सायद धेरै नै हासिल गर्न सक्दछ, तर यसले सफलतापूर्वक जागरूकता र ड्राइभ राजस्व बढाउन प्रयोग गर्न सक्दछ नेटिभ विज्ञापन.
यो अनलाइन क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा होईन, तर धेरै ब्रान्डहरू अझै यसलाई पूर्ण हदसम्म शोषण गर्न असफल हुन्छन्। उनीहरूले ठुलो गल्ती गरिरहेका छन् किनभने नेटिभ विज्ञापन सबैभन्दा लाभदायक पदोन्नति रणनीति हो जो लगभग लगानीमा इच्छित फिर्ताको लागि ग्यारेन्टी गर्दछ।
तर यो कसरी काम गर्दछ? तपाईं देशी विज्ञापन र सामग्री मार्केटिंग बीच सही सन्तुलन बनाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं यी दुई प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिने भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, सामग्री मार्केटिंगमा नेटिभ विज्ञापनको मौलिक सिद्धान्तहरू सिक्न पढिरहनुहोस्।
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि सामग्री मार्केटिंगले डिजिटल ब्रह्माण्डमा प्रभुत्व जमाइरहेको छ, तर कसरी मूल विज्ञापनको बारेमा? यदि तपाईं वास्तवमै यो कसरी कार्य गर्दछ जान्न चाहानुहुन्छ भने, यसको अर्थ के हो तपाईंले बुझ्नु पर्छ र यस फिल्डमा आधारभूत तथ्या .्कहरू जाँच गर्नुपर्दछ।
नेटिभ विज्ञापन भनेको भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरूको प्रयोग हो जुन उनीहरूको मिडिया ढाँचाको दृश्य, अनुभव र कार्यसँग मेल खान्छ। तपाइँ प्राय: नेटिभ विज्ञापनहरू तपाईको सोशल मिडिया न्यूजफीडको भागको रूपमा वा तपाइँको मनपर्ने वेबसाइटहरूमा लेख सिफारिशहरूको रूपमा देख्नुहुनेछ।
मूल विज्ञापन तथ्या Stat्क
त्यस्ता सामग्री ढाँचा दिईएको संचार प्लेटफर्मको सामान्य सम्पादकीय चयनसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ठीक त्यस्तै हो जुन नेटिभ विज्ञापनलाई प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउँदछ:
नेटिभ डिस्प्ले विज्ञापनले क्लिक-थ्रू रेट (CTR) उत्पादन गर्दछ 8.8 पटक विशिष्ट प्रदर्शन विज्ञापन भन्दा उच्च।
ग्राहकहरूको 70% बरु परम्परागत विज्ञापन भन्दा सामग्री को माध्यम बाट उत्पादनहरु को बारे मा जान्न।
दुई तिहाई प्रयोगकर्ताहरू फेला पार्दछन् सुझाव गरिएको सामग्री नेटिभ विज्ञापनको सबै भन्दा उपयोगी तरीका हुन।
अमेरिकी विज्ञापनदाताहरु लगभग खर्च गर्छन् $ 44 अर्ब नेटिभ विज्ञापनमा बार्षिक
सामग्री मार्केटिंगमा नेटिभ विज्ञापनको फाइदाहरू
नेटिभ विज्ञापन स्पष्ट रूपमा शक्तिशाली छ, तर तपाइँले यो जान्नुपर्दछ कि यो व्यावहारिक लाभहरूको एक विस्तृत क्षेत्रको साथ आउँदछ। सामग्री बजारमा नेटिभ विज्ञापनको प्रमुख लाभहरू यहाँ छन्:
नेटिभ विज्ञापनहरू हस्तक्षेप गर्दैनन्: अन्य प्रोमो ढाँचाको विपरीत, नेटिभ विज्ञापनहरू प्रयोगकर्ता मैत्री र गैर-घुसपैठ हुन्। नामले सुझाव गरेझैं त्यस्ता विज्ञापनहरू प्राकृतिक र जैविक देखिन्छन् जसले तिनीहरूलाई ब्यानर विज्ञापन वा पपअपहरू भन्दा बढि मनमोहक बनाउँछ।
नेटिभ विज्ञापनहरू विश्वसनीय छन्: व्यक्ति प्रायः नेटिभ विज्ञापनहरू भरपर्दो र विश्वासयोग्य मान्दछन्। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, विशेष गरी यदि तपाइँ विज्ञापन र सामग्री मार्केटि ofको एक उत्तम मिश्रण सिर्जना गर्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाईले अन्तरदृष्टि प्रोमो सामग्रीको साथ मात्र श्रोताहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ।
उच्च CTR: नेटिभ विज्ञापनहरूमा मानक विज्ञापन फारमहरूको तुलनामा धेरै क्लिक-थ्रु रेट (CTR) हुन्छ, जुन उनीहरूको विश्वसनीयता र विश्वसनीयताको परिणाम हो। यस प्रकारको विज्ञापन धेरै धक्कादार छैन, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले सामग्री लिने र अन्ततः यसको साथ व्यस्त हुने मन पर्दैन।
नेटिभ विज्ञापन सबैको लागि उपयुक्त छ: नेटिभ विज्ञापन र सामग्री निर्माणको संयोजन व्यवसायमा समावेश सबैलाई पूर्ण रूपमा सूट गर्दछ। उपभोक्ताहरूले यसलाई मनपराउँदछ किनकि यसले गुणवत्तायुक्त सामग्री प्रदान गर्दछ, जबकि प्रकाशकहरूले यसलाई मनपराउँदछन् किनकि यसले जैविक पोष्टहरूमा हस्तक्षेप गर्दैन। अन्तमा, विज्ञापनदाताहरू स्वदेशी विज्ञापन मन पराउँछन् किनकि यसले लक्षित परिणामहरू दिन्छ।
नेटिभ विज्ञापन सबै प्लेटफार्महरुमा मिल्दछ: तपाईं संचार को लगभग सबै च्यानल मा मूल निवासी विज्ञापन प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक मिडिया र वेबसाईटहरूबाट परम्परागत म्यागजिनहरू र ब्रोशरहरूमा नेटिभ विज्ञापन सबै माध्यमहरूमा लागू हुन्छ।
नेटिभ विज्ञापनहरू सुधार गर्ने W तरीकाहरू
अब जब तपाइँ नेटिभ विज्ञापनको आलोचनात्मक सुविधाहरू बुझ्नुहुन्छ, मात्र बाँकी मात्र यो तपाइँको सामग्री मार्केटिंग प्रयासको साथ कसरी पेयर गर्ने भनेर जान्नको लागि हो। हामी तपाईंको लागि चार व्यावहारिक सल्लाह र युक्तिहरूको सूची तयार गर्दछौं।
सुझाव # १: तपाईंको दिमागमा श्रोताहरूको साथ यो गर्नुहोस्
नेटिभ विज्ञापनको पहिलो नियम ब्राण्ड-केन्द्रित हुनु हुँदैन र तपाईंको दिमागमा लक्षित दर्शकहरूसँग लेख्नु हुँदैन। यो नबिर्सनुहोस् कि शीर्ष प्रदर्शन गर्ने स्वदेशी विज्ञापन सामग्रीको उत्कृष्ट टुक्रा भन्दा बढि केहि हुँदैन जुन पाठकहरूलाई सरासर उत्साह र गुणवत्ताको साथ प्रेरित गर्दछ।
तपाईंको काम भनेको तपाईंको सम्भावितहरूको चासोहरूको विश्लेषण गर्नु र तिनीहरूको अपेक्षाहरू, आशा, आवश्यकताहरू, र विश्वासहरूको अनुरूप शीर्षकहरूमा फोकस गर्नु हो।
ज्याक गार्डनर, एक असाइनमेन्ट प्रदायक at व्यावसायिक लेखन सेवाहरु, भन्छन् कि उपभोक्ताहरूले दिइएको विषयको बारेमा कसरी सोच्दछन् भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ: "उनीहरूले व्यवहार गरिरहेको समस्याहरू पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यस तरीकाले, तपाईं उच्च-गुणवत्ताको सामग्री तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन मानिसहरूलाई पढेर कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। ”
उही समयमा, तपाईले सबै भन्दा राम्रो वितरण च्यानलहरूको बारेमा सोच्न पर्छ। के तपाइँ सामाजिक नेटवर्कहरू मार्फत विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ वा सिफारिश गरिएका पृष्ठहरूसँग जान चाहनुहुन्छ? हाम्रो सिफारिश भनेको च्यानललाई शोषण गर्नु हो जुन तपाईंलाई थाहा छ विशेष गरी तपाईंको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न सक्छ।
सुझाव # १: स्टैंडआउट प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्नुहोस्
धेरै मार्केटरहरू दोस्रो टिपलाई महत्त्वपूर्ण मान्दछन् किनकि यसले सफल अभियानहरू र अper्ग प्रदर्शन प्रदर्शनको बिचमा सबै फरक पार्दछ। अर्थात्, तपाइँले प्रत्येक नेटिभ विज्ञापनको लागि अलग स्ट्यान्डआउट प्रतिलिपि तयार गर्न सबै लिनुपर्दछ।
यसको के मतलब छ?
सबैभन्दा पहिले, सामग्री उच्च जानकारीमूलक, शैक्षिक, र / वा मनोरन्जनकारी हुनु पर्छ। दोस्रो, नेटिभ विज्ञापनहरू वस्तुनिष्ठ र पक्षपाती हुनु हुँदैन। पोइन्ट डाटा-संचालित निष्कर्ष निकाल्ने र प्रमाणहरूको साथ तपाईंको बयान समर्थन गर्दछ।
एकै साथ तपाईंको पोस्टहरू हिज्जे र व्याकरणको हिसाबले पनि उत्तम हुनुपर्दछ। एकल गल्तीले तपाईंको प्रतिष्ठा बिगार्न सक्छ, त्यसैले तपाईं लाइभ हुनु अघि सामग्रीको प्रत्येक टुक्रा दुई पटक राम्रोसँग जाँच गर्नुहोस्। यदि प्रुफरीडि exactly तपाईको कुरा होईन भने हामी तपाईलाई दृढताका साथ डिजिटल प्लेटफार्महरु को उपयोग गर्न हौसला दिन्छौं Grammarly or हेमिंगवे.
सुझाव # १: एक अवतरण पृष्ठ अनुकूलन गर्नुहोस्
सबै नेटिभ विज्ञापनहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको सम्बन्धित ल्यान्डि page पृष्ठमा प्रयोगकर्ताहरूलाई पुनःनिर्देशित गर्नु हो। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, तपाईंले निश्चित गर्नु पर्दछ कि तपाईंको अवतरण पृष्ठ आदर्श रूपले तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको सामग्रीको सन्देशमा फिट छ।
ब्रान्डि cons स्थिरताको इष्टतम स्तर सुनिश्चित गर्न समान शैली र प्रतिलिपि अधिकारको टोन प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। अवश्य पनि, अवतरण पृष्ठले तपाईंको सम्भाव्यताहरूको बारेमा पढ्ने उत्पादन वा सेवालाई बढावा दिनै पर्छ।
अन्तमा, यस पृष्ठले कार्यमा स्पष्ट र अत्यधिक देखिने कल (CTA) समावेश गरेको हुनुपर्दछ। राम्रोसँग स्थित सीटीए बटनले आगंतुकलाई थप दिशा निर्देशन दिन्छ र लैंडिंगमा कसरी संलग्न हुने भनेर तिनीहरूलाई देखाउँदछ।
सुझाव # १: सुधार गर्न उपाय
हाम्रो सूचीमा अन्तिम टिप भनेको तपाईंको मूल विज्ञापन सामग्रीका नतीजाहरू मापन गर्नु हो किनभने भविष्यका अभियानहरू सुधार गर्ने यो एक मात्र तरीका हो। यो कार्य धेरै सजिलो छ यदि तपाईंले सहि लक्ष्यहरू सेट गर्नुभयो र प्रमुख प्रदर्शन सूचकहरू (KPI) निर्धारित गर्नुभयो भने।
सामान्यतया बोल्दै धेरै विज्ञापनदाता दुई प्यारामिटरमा केन्द्रित हुन्छन् - दृश्य र क्लिकहरू। जबकि दुई केपीआई वास्तवमै महत्वपूर्ण छन्, हामी तपाईंलाई तेस्रो कारकमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिन्छौं जुन तपाईंको अभियानको सफलता वा असफलता प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गर्दछ। हामी पोस्ट-क्लिक सगाईको बारेमा कुरा गर्दैछौं, एक कुञ्जी प्यारामिटर जसले स्वदेशी विज्ञापनको प्रदर्शन स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ।
सामग्री निर्माण हाम्रो युगको सब भन्दा प्रभावशाली मार्केटिंग अवधारणा हो, तर प्रत्येक स्थानमा धेरै प्रतिस्पर्धीहरूको साथ डिजिटल सूर्यमा तपाईंको स्थान पत्ता लगाउन यो सजिलो छैन। यो त्यहि हो जहाँ नेटिभ विज्ञापनले व्यवसायको स steps्लग्नतालाई बढावा दिईरहेको छ।
यस पोष्टमा, हामीले नेटिभ विज्ञापनको अवधारणाको बारेमा व्याख्या गर्‍यौं र तपाईंलाई सामग्री मार्केटिंगमा सफलतापूर्वक जोड्न चार तरिकाहरू देखाउँदछौं। तपाईंले यी टिप्स र युक्तिहरू उत्तम नेटिभ विज्ञापन अभियानहरू डिजाइन गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ, तर तपाईंलाई हाम्रो पक्षबाट बढि सुझावहरू चाहिएको खण्डमा टिप्पणी लेख्नुहोस् - हामी जवाफ दिन खुसी हुनेछौं!
टैग: नेटिभ विज्ञापननेटिभ विज्ञापन परिभाषानेटिभ विज्ञापन तथ्या .्कनेटिभ विज्ञापन सल्लाहनेटिभ डिस्प्ले विज्ञापनहरूमस्तिष्कसामाजिक संजालसुझाव गरिएको सामग्री
एलिस जोन्स सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्नियाको डिजिटल मार्केटर हो। उनी उत्तमका लागि ब्लग पोष्ट लेख्दैछिन् सेवाहरू पुनः सुरु गर्नुहोस् र सामग्री निर्माण एजेन्सीहरू। एलिस दुई बच्चा र एक भावुक योग चिकित्सकको आमा हो।